စျေးဝယ်ရုံနဲ့ ကိုဗစ်ကူးနိုင်သလား? အပြင်ထွက်ရင် အင်္ကျီ၊ ဆံပင်၊ ဖိနပ်တွေပေါ်မှာ ပိုးကပ်ပါလာနိုင်သလား? - Zet Star
စျေးဝယ်ရုံနဲ့ ကိုဗစ်ကူးနိုင်သလား? အပြင်ထွက်ရင် အင်္ကျီ၊ ဆံပင်၊ ဖိနပ်တွေပေါ်မှာ ပိုးကပ်ပါလာနိုင်သလား?
ဒီကိစ္စကို ရောဂါပိုးကျွမ်းကျင်သူတွေဖြေထားတာရှိပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လေ အင်္ကျီလဲပြီး ခေါင်းကနေလောင်းပြီး ရေချိုးပစ်ရမှာလား? အပြင်ထွက်ရင် ဈေးထဲမှာ Social Distancing လုပ်ပြီး ခပ်ခွာခွာဈေးဝယ်ကြပါသလား? ဥပမာ – City Mart မှာ ဈေးဝယ်တယ်၊ ခပ်ခွာခွာရပ်တယ်။ လူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းတယ်။ ဒါဆိုရင် အင်္ကျီကို ချိတ်နဲ့ချိတ်ပြီး ပြန်လှမ်းထားလို့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လူတွေကျပ်ညပ်နေတဲ့ ဈေးမျိုးမှာဝယ်ရတာဆိုရင်… တချို့ဈေးတွေမှာ ဆိုင်တွေကို ခွာထားတယ်။ လူတွေကို ခပ်ဝေးဝေးက တန်းစီခိုင်းတယ်။ ပစ္စည်းပေးရင်တောင် ဝါးလုံးနဲ့။ အဲ့လိုတကယ်လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ရန်ကုန်က ၇ လမ်းထိပ်တို့၊ ၁၈ လမ်းထိပ်တို့မှာတော့ လူတွေဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် ပူးကပ်နေမြဲပါပဲ။ တိုးကြိတ်ဈေးဝယ်နေကြတာပါပဲ။ ဒါမျိုးဆို အိမ်ရောက်တာနဲ့ အဝတ်ကိုတန်းပြီးလျှော်မယ့်အထဲ ထည့်တာကောင်းပါတယ်။
ကျနော်တို့က ငြိမ်နေရင်လည်း ဖုန်တက်မြန်တယ်။ အရမ်းမြန်ရင်လည်း ဖုန်တက်မြန်ပါတယ်။ (ပန်ကာဒလက်ကိုကြည့်ပါ။) ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ဟာ Social Distancing လို့ခေါ်တဲ့ ခပ်ခွာခွာဆက်ဆံခြင်းမူကို လက်ကိုင်ထားရင် လေထဲမှာရှိနေတဲ့အမှုန်ကို ကြောက်စရာမလိုပါ။ ဒါပေမယ့် လူတွေကြားထဲကျပ်ညပ်ဈေးဝယ်ရရင် ဆံပင်နဲ့အင်္ကျီပေါ် ပိုးပါတဲ့အမှုန်တွေ ဒါရိုက်ကျနိုင်တာမို့ အင်္ကျီကို လျှော်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုတာပါ။
ဆံပင်ပေါ်အနောက်ကနေ တယောက်ယောက်ချောင်းဆိုးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ခေါင်းအုံးနဲ့ ဆိုဖာပေါ် ပေါ်လှဲမချပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်ခေါင်းအုံးပါ။ တယောက်ယောက်က ဆံပင်ပေါ် တိုက်ရိုက်ချောင်းဆိုးခဲ့ရင်တောင်မှ အများစုကလေထဲလွှင့်သွားပါမယ်။ တကယ်ကူးစေတာက လက်ဆီကပါ။
နောက်တစ်ချက်က ပိုးဟာကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းကို လေနဲ့ဆန်မတက်ပဲ ကိုယ်ခန္ဓာ အောက်ပိုင်းဘက်ကို ပိုရောက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဆံပင်ကို သိပ်စိတ်ပူစရာမရှိပါ။ ကိုဗစ်ကာလမှာ ဆံပင်တိုတို ထားကြပေါ့။ ဒါ့ကြောင့်ဈေးကပြန်လာရင် အဓိကကလက်ကို အသေအချာဆေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်ကိုခါပစ်တာဟာ လေထဲကိုပိုးတွေလွင့်ပြီး သင်ပြန်ရှုမိတတ်ပါတယ်။ Hair dryer နဲ့မှုတ်တာလည်း အဲ့ဒီအပူလောက်နဲ့ ပိုးမသေပါ။ အမှုန်တွေကို သင်ရှုမိတတ်ပါတယ်။
← စင်ကာပူရဲ့ အတုယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေး နည်းလမ်းများ (အမိန့်တွေ အများကြီး မထုတ်ပါဘူးတဲ့)
ကိုဗစ်ကာလမှာ ပေါ်လာတဲ့ ရန်ကုန်မြေအောက်လောကတခု (ဒီကိစ္စတွေကတော့ ဖြစ်မှာပဲ) →